T - Thi La Ganda - သီလကဏ္ဍ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ငါးပါးသီလ...
ဆရာတော်ဦးသာသန ၏ ငါးပါးသီလပေး
Tags: ဆရာတော်ဦးသာသန ၏ ငါးပါးသီလပေး , ငါးပါးသီလ , သီလ , sayardaw u tharthana , sayardaw utharthana , usarsana , u sarsana , ThaLa , thi la ,5par thi la , 5parthila Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဘာသာတရားဆ...
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ , ၀ံသာနု , ဖိုးပညော (သပိတ်ကျင်း) , tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la wuntharnu phoe pyin nyaw phoepyinnyaw Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဓမ္မစေတီဂိ...
ဓမ္မစေတီဂိုဏ်းနှင့်၎င်း၏ နောက်ခံသမိုင်း- ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ
်font မမြင်ရပါက download လုပ်ပြီးမှ ဖတ်ပါ။
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ မစိုးရိမ်စာသင်သား ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ ဓမ္မစေတီဂိုဏ်း tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la dhammasayde dhammasaydi dhammazayde dhammazayde dhamma zay de zay di say di say de Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ပစ္စုပ္ပန်က...
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒကို စာပေတင်၍ စစ်ဆေးချက် -တောင်သာအောင်
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဝိနိစ္ဆယ တောင်သာအောင် မိုးပြာဝါဒ သင်္ဂါဟက tharthanaparla sarsanaparla thar tha par la sar sa na par la moepyar moe pyar warda war da Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ အမှား...
အမှား ၀င်္ကပါ(ဓမ္မစေတီ ရှင်းတမ်း )- ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ၏ ၀ါဒကို အဓမ္မ၀ါဒဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ထားပါသည်။
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဝိနိစ္ဆယ မစိုးရိမ်စာသင်သား ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ သာသနာ့ပါလ သာသနပါလ tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဘာထရန်ရပ်...
ဘာထရန်ရပ်ဆယ်ရဲ့ Why I am not Christian စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ချက်များ
Tags: ဘာသာခြားလေ့လာရေး သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ သာသနပါလ သာသနာ့ပါလ ဘာထရန်ရပ်ဆယ် why i am not christian tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - TharThaNaParLa - သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ မိစ္ဆာမျို...
Tags: ဖိုးပညော (သပိတ်ကျင်း) သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ဝံသာနု အမျိုးကိုချစ်ဘာသာကိုမပစ်နဲ့ သာသနာ့ပါလ သာသနပါလ phoepyinnyaw phoe pyin nyaw amyoekochitbartharkomapyitnae amyokochitbartharkomapyitnaeamyo ko chit bar thar ko ma pyit nae tharthanaparla sarsanaparla thar tha na par la sar sa na par la Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / M - Dr. Min Tin Mon - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် သာသနာ.တံခ�...
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် သာသနာ.တံခွန် စံပြပုဂ္ဂ္ဂ္ဂိုလ်ထူး သပြေကန်ဆရာတော်ဘုရား
Tags: ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် သာသနာ.တံခွန် စံပြပုဂ္ဂ္ဂ္ဂိုလ်ထူး သပြေကန်ဆရာတော်ဘုရား _ doctor mintinmon dr mintinmon dr.mintinmon drmintinmon min tin mon tharthanar sarsanar honorable honorary person monk thapyaykansayardaw thapyaykan sayardaw sayartaw Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / O - U Oattamatharra တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ ဘ၀တံခွန်ေ...
Tags: တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ UOattamasara U Oattamasara taungtantharthanarpyu sayardaw taung tan thar tha nar pyu sayardaw သာသနာ့ပါလ သာသနပါလ TharThaNaParLa SarSaNaParLa Thar Tha Na Par La Sar Sa Na Par La Pages: 12345 of 5